विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महसुलबारे तपाईंलाई चित्त बुझेन ? यहाँ सुझाव पठाउँनुस् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महसुलबारे तपाईंलाई चित्त बुझेन ? यहाँ सुझाव पठाउँनुस्
विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महसुलबारे तपाईंलाई चित्त बुझेन ? यहाँ सुझाव पठाउँनुस्
फागुन ७ गते, २०७६ - १४:२८
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले ग्राहकहरुसँग नयाँ विद्युत महसुलको बारे सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । आयोगले नयाँ महसुल शुल्कको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
बुधबार आयोगले सूचना निकालेर विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको शुल्क आयोगको वेबसाइट http://erc.gov.np/consumertariff/erc/ मा राखिएकाले अध्ययन गरेर info@erc.gov.np मा सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म र पुसदेखि वैशाखसम्म तथा दिउँसो, साँझ र रातिमा फरक–फरक शुल्कसहितको महसुल दर प्रस्ताव गरेर विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको छ । प्राधिकरणले १० युनिटसम्म खपत गर्नेले मासिक ३० रुपैयाँ तिर्नेदेखि सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत मूल्यमा बिजुली दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
फागुन ७ गते, २०७६ - १४:२८ मा प्रकाशित